Home Wararka Gudaha Wasiirro ka tirsan Jubaland oo howlo shaqo u jooga Dhoobley ayaa
Wasiirro ka tirsan Jubaland oo howlo shaqo u jooga Dhoobley ayaa
Wasiirro ka tirsan Dowlada Jubaland oo howlo shaqo u jooga magaalada Dhoobley ayaa kormeer ku tagay xarumaha danta guud ee kuyaala Dhoobley.
Wasiiradan ayaa isugu jiray Wasiirka arimaha gudaha iyo dib faderaaleynta Jubaland Gen Maxamed Warsame Darwiish, Wasiirka Howlaha guud iyo guryeenta mudane Eng Ismaciil Axmed Garas, Wasiirka Caafimadka Jubaland Maxamed Cabdi Oogle, Wasiirka Tamarta iyo Biyaha Axmed Xuseen Baraki, iyo saraakiil
Kale oo ka tirsan Wasaaradahaa.
Masuuliyiintan ayaa ugu horeyntii u kuuragalay xaaladda suuqa xoolaha ee magaalada Dhoobley oo u iib joogeen xoolo kale duwan oo laga kala keenay deegaanada Jubaland, waxaana xaaladda suuqa oga warbixiyey masuuliyiinta Gudoomiyaha magaalada Siyaad Maxamed Xasan.
Booqashadii xigtay waxa ay Wasiiradu gaareen dhismaha xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya laanteeda labaad ee dhoobley halkaas oo loogu adeego muwaadiinta Soomaaliyeed, sidoo kale waxa ay kormeereen xuduuda Soomaaliya iyo Kenya.
Isbitaalka guud ee magaalada Dhoobley oo shaqooyin muhiim ah u haya deegaanada hoos yimaada Dhoobley ayey kormeerka ku tageen wasiiradda, qaybaha kale duwan oo lagu soo kordhiyey isbitaalka dhoobley iyo goobo kale sida hooyada iyo dhalaanka, qaybta gurmadka deg dega ah, iyo qaybo kale duwan oo xiligan shaqeeyo ayey soo indha indheeyeen wasiiradda.
Previous articleDeni iyo Karaash oo kulan gaar ah yeeshay kadib khilaaf soo kala dhexgalay.!
Next articleVilla Somalia oo shaacisay qorshe lagu soo daabacayo lacag cuusb